Dowladda oo caddaalad u ballanqaaday qoys laga dilay labo wiil | Star FM
Home Wararka Kenya Dowladda oo caddaalad u ballanqaaday qoys laga dilay labo wiil
Dowladda oo caddaalad u ballanqaaday qoys laga dilay labo wiil
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiang’I ayaa sheegay inay caddaalad heli doonaan xubnaha qoys ku nool ismaamulka Embu oo dhawaan laga dilay labo wiil oo walaalo ah.
Wiilashan ayaa la arkay iyagoo meyd ah ka dib markii ay xireen ciidamada booliska.
Wasiirka ayaa sheegay in la dardargelin doono baaritaanada ku aaddan arrinkan.
Ballanqaadan ayuu Matiang’i sameeyay xilli uu la kulmay qoyska Benson Njiru oo 22 sano jir ahaa iyo Emmanuel Mutura oo da’diisu lagu sheegay 19.
Dr. Matiang’i , taliyaha guud ee booliska Hillary Mutyambai iyo xeer ilaaliyaha qaranka Kihara Kariuki ayaa qoyska labada wiil ee la dilay u xaqiijiyay in saraakiisha booliska ee falkan lagu cadeeyo laga qaadi doono tallaabo sharciyeed.
Previous articleGolaha barasaabyada oo xaqiijiyay in shirka dowlad wadaajinta lagu qaban doono Makueni
Next articleDHAGEYSO:Baarlamaanka Soomaaliland oo Qaylo dhaan ka keenay Maandooriyaha oo ku soo badanay